Friday, 06 April 2018 20:14
Friday, 06 April 2018 20:12
Itoophiyaan shaampiyoonaa Kaampaalaa garee lamaan hirmaatti
Finfinnee: Shaampiyoonaan Kubbaa Harkaa Dargaggoota Afrikaa qopheessummaa Federeeshinii Kubbaa Harkaa Biyyooleessaatiin waggaa waggaadhaan biyyoota Afrikaa adda addaatti gaggeeffama.
Shaampiyoonichi kan gaggeefamu korniyaa lameeniinuu yoo ta’u, sadarkaa dargaggoota umrii 20 gadiifi dargaggoota guddatoota umrii 17 gadii ta'an gidduutti kan adeemsifamuudha.
Federeeshinichi dursee walmorkii biyyoota miseensotaa Zooniiwwan Afrikaa afran jechuun Afrikaa Bahaa, Lixaa, Kibbaafi Kaabaatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, walmorkii kanarratti 1fa bahuun shaampiyoonaa kan ta’e shaampiyoonicharratti kan hirmaatudha. Lammaffaadhaa hanga arfaffaa kanneen bahanis shaampiyoonaa Afrikaarratti hirmaachuuf carraa argatu jechuudha.
Haaluma kanaan shaapiyoonaan zoonii Afrikaa Bahaa barana Caamsaa 12-20 bara 2010tti magaalaa guddoo Ugaandaa, Kaampaalaatti kan gaggeeffamu yoo ta’u, biyyoonni sadarkaa tokkoffaadhaa hanga arfaffaa bahan zoonicha bakka bu'uun hirmaatu.
Itoophiyaanis shaampiyoonaa kanarratti garee lamaan kan hirmaattu yoo ta'u, qophii kanaaf Federeeshiniin Kubbaa Harkaa leenjistoota afur filuudhaan taphatoota akka walitti qabaniifi shaakalsiisan gochaa jira. Itti gaafatamaan Waajjira Federeeshina Kubbaa Harkaa Itoophiyaa Obbo Mollaa Tafarraa gaazexaa Bariisaaf akka ibsanitti, Shaampiyoonaa zoonii Afrikaa Bahaarratti Itoophiyaan garee lamaan hirmaatti. Dargaggoota umrii 20 gadiifi umrii 18 gadiitiin jechuudha. Garee dargaggoota umrii 20 gadiif leenjisaan kilabii kubbaa harkaa Raayyaa Ittisaa Obbo Mohaammad Ahmadiifi gargaaraasaanii leenjisaa kilaba Poolisii Federaalaa Obbo Tasfaayee Mulugeetaa filuusaanii himaniiru.
Akkasumas kanneen umrii 18 gadiif ammoo leenjisaa kilaba kubbaa harkaa kutaa magaalaa Qirqoos Obbo Mulugeetaa Girmaafi leenjisaa kilabii kubbaa harkaa kilabii magaalaa Maqalee Obbo Amaanu'eel Siyyum gargaaraasaanii gochuun filusaanii addeessaniiru.
Gareewwan lameeniifuu taphatoonni 14,14 akka filaman kan dubbatan Obbo Mollaan, isaanis kan filaman kilaboota liigii piriimeerii Kubbaa Harkaa Itoophiyaarraa ta’uu ibsaniiru.
Taphatoonni filamanis ji'a Eblarraa kaasanii dorgommichaaf qophii kan godhan ta’uu himanii, kana raawwachiisuuf hir’inni bajetaa waan jiruuf federeeshinichi rakkina keessa galeeraa jedhaniiru.
Ta’us, federeeshinichi harkasaa maratee hinteenye kan jedhanii, Ministeerri Dargaggootaafi Ispoortii Federaalaa, akkasumas Koreen Olompikii Biyyaaleesaa Itoophiyaa akka furaniif xalayaadhaan gaafatamanii deebiin eegamaa akka jiru addeessaniiru. Kallattii garagaraanis dhaabbilee maallaqa kennuu danda’an gaafachaa kan jiran ta’uus dubbatanii, deebii gaarii argachuuf abdii qabaachuusaanii ibsaniiru.
Itoophiyaan ALI bara 2006tti shaampiyoonaa kubbaa harkaa dargaggoota Zoonii Afrikaa shanii qopheessuunshee kan yaadatamuudha.
Friday, 06 April 2018 20:11
Friday, 06 April 2018 20:10
Friday, 06 April 2018 20:09
“Doktar Abiyyi Ahmad baga gammaddan, jabaadhaa” -Doktar Nagaasoo Gidaadaa
Finfinnee: Ga'eessa umrii 42 kan ta'an Doktar Abiyyi Ahmad ministira muummee Itoophiyaa ta'anii biyyaafi ummata Itoophiyaa tajaajluuf Wiixata darbe paarlaamaatti dhiyaatanii sagalee guutuudhaan moggaafamuunsaanii ni yaadatama.
Gaazexaan Bariisaa ministira muummee ta'anii muudamuu Doktar Abiyyi kanarratti hayyuu seenaafi siyaasaa kan ta'an, pirezdaantii duraanii Mootummaa RFDI, Doktar Nagaasoo Gidaadaa miira itti dhagahame hubachuuf haasofsiiseera. Ibsi isaan kennanis akka armaan gadiitti dhiyaateera.
Anis akkuma nama tokkootti ministira muummee ta'uu Doktar Abiyyitti daran gammadeera. Oromoon bakka kana qabachuusaatti gammadeera. Yoo seenaa ilaalle Oromoon warra Yajjuutii eegalee kun ta'ee hinbeeku. Oromoodha jedhamanii yaadamaa kan turan Jeneraal Tafarii Bantiidha. Isaanis waggaa tokkoofi walakkaa qofaaf pirezdaantummaan biyya kan bulchan.
Dur nama tokkotu mataa biyyaa ta'a ture. Amma garuu sirna kana keessa mootii tokko wanti jedhamu hinjiru. Ta'us ummata tokko keessaa namoonni taayitaa hirataniis haa ta'uu utuu hinhiratiin pirezdaantiin pirotokoliidhaan daran olaanaadha. Kan ittaanu afyaa'iidha. Sadaffaan ministira muummeedha.
Oggaa akka jiddugaleessaatti ilaalamu ammoo Finfinnee jiddugaleessa biyyaati. Kantiibaa magaalaa kanaa ta'uunis iddoo cimaadha. Kanaaf taayitaawwan guguddoo kanneen kan qabate Oromoodha.
Waan labsame hojiirra oolchuurratti ittigaafatamaa murteessaan ministira muummeedha. Namni keenya ministira muummee ta'uunsaa yoo qofaasaa murteessuu baateyyuu isatu ittigaafatama.
Kanaaf Doktar Abiyyi taayitaa guddaa kana qabachuun seenaa Oromoo keessatti waan guddaadha. Akkuma lammii Oromoo tokkootti anis gammadeera;carraa kana argachuu keenyaan. Haa ta'u malee waan dhaabni jiruuf waantota hunda isaan qofatu murteessa jechu miti. Wajjummaan murteessu.
Mootummaa isaan ogganan qofatu biyya kana jijjiira jechuu waan hintaaneef milkaa'ina karoorasaaniitiif ummanni hirmaatee walgargaaruu qabna.
Haasaa Wiixata darbe Doktar Abiyyi taasisan gama hundaanuu yoo ilaalame biyya kanatti taasifamee hinbeeku. Haasaansaanii haalaan qofa otoo hintaane qabiyyeedhaanis adda. Haasaansaanii jijjiiramoonni heddu biyya kanatti akka dhafan kan abdachiisuudha. Kanattis daran gammadeera. Kan jedhame kana hojiirra oolchuuf tattaafachuun barbaachisaadha. Isaanis raawwiisaa cimanii akka hordofan ni abdanna, ni ammanna.
Friday, 06 April 2018 20:06
Friday, 06 April 2018 20:01
Torban kana/This_Week 4295
Guyyaa mara/All_Days 1641890